Uvavanyo lwe-OCD | Fumanisa ukuba ngaba yi-OCD, udidi, kunye nobunzima
Fumanisa ukuba ngaba i-OCD, uhlobo, kunye nobunzima
Abemi behlabathi bahlala ne-OCD
Amathuba amanye amalungu osapho anemeko kunye nembali yosapho yale meko-
I-1 kwi-4 (25%)
75.8% amathuba okuba ube nokunye ukuphazamiseka, kubandakanya:
Ukuxhalaba ekuhlaleni / SAD
Ukuxhalaba ngokubanzi / i-GAD
Uloyiko / Uxinzelelo
Abantu abayi-156,000,000 kwihlabathi liphela
ichaphazela zonke iintlanga, ubuhlanga
isasazeka ngokulinganayo phakathi kwamadoda nabafazi
Abantu abadala bane-OCD
abantwana baphethwe yi-OCD
Ukusuka kulo lonke ilizwe
Njengomntu onesifo esine-Obsessive-Compulsive Disorder ngaphezulu kweshumi leminyaka, ndiyathemba ukuba le webhusayithi iyakuxhasa ngokufumana ithemba, ukucaca kunye nokuqonda indlela yokuphelisa umjikelo we-OCD.
Umseki we OCDTest.com
Yintoni ingxaki yokujonga ngokunyanzelekileyo?
Isifo esiyi-Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) sisifo esinexhala esenziwe ngamacandelo amabini: Ukuqwalaselwa kunye nokunyanzelwa. I-OCD yimeko engapheliyo, yemfuza evelisa uxinzelelo olukhulu xa ingafumaniswanga kakuhle kwaye inyangwa. I-OCD inokuchaphazela kakubi umntu ngokwengqondo, ngokweemvakalelo nangokwasentlalweni.
Iimpawu ze-OCD zibandakanya i-obsessions, eyaziwa njengezingafunekiyo ezingafunekiyo ezinamava njengeengcinga eziphindaphindayo, imifanekiso, okanye iimpembelelo ezingalunganga kwaye zivelisa uxinzelelo kunye nokuphazamiseka.
Iindidi zovavanyo lwe-OCD
Uvavanyo lwethu lwe-OCD Subtype lolona vavanyo lubanzi lwe-OCD kwi-intanethi. Injongo yethu yayikukwenza uvavanyo oluya kuthi lubonakalise ngokucacileyo ukuba zeziphi iintlobo ze-OCD ezikhoyo nokuba zikweliphi inqanaba. Olu vavanyo lunemibuzo emi-4 kuvavanyo lomntu ngamnye, iyonke iyimibuzo eli-152 kolu vavanyo lwendibano.
Thatha uvavanyo lwe-OCD:
Uvavanyo lwe-OCD Uvavanyo lokuqina kwe-OCD Uhlobo lovavanyo lwe-OCD
Uvavanyo lokunyanzelwa kokunyanzelwa (OCD) kunye nokuzivavanya
Iziko lethu lewebhu libonelela ngeendlela ezininzi zovavanyo lwe-OCD, kubandakanya novavanyo lwe-OCD yokuqina, Uvavanyo lwe-OCD oluChukumisayo lweeNgcinga, iintlobo zoVavanyo lwe-OCD, kunye noThotho oluhlukeneyo lovavanyo lwe-OCD. Uvavanyo lokuqina kwe-OCD luyilelwe ukuvavanya ubukhali kunye nohlobo lweempawu ze-OCD kwizigulana ezine-OCD. Ngaphambi kokuba uqale uvavanyo, funda ezi nkcazo zilandelayo kunye nemizekelo ye- "Obsession" kunye ne "Compulsions." Thatha uvavanyo lwe-OCD yobunzima.
Ukongeza, sikwabonelela ngovavanyo lwe-OCD Subtype, eya kuthi incede ekuchongeni ukuba loluphi uhlobo lwe-OCD onokuba usokola kulo. Olu vavanyo lunama-subtypes angama-38 e-OCD. Thatha uvavanyo lweentlobo ze-OCD.
Ukuqwalaselwa kukuphindaphindeka, ukungafuneki, iingcinga zokungena ngaphakathi, imifanekiso, okanye iimpembelelo ezingalunganga kwaye zivelisa uxinzelelo kunye nokuphazamiseka. Imixholo yokujonga abantu abane-OCD ingeza ngeendlela ezininzi; iintsholongwane, ukulandelelana, ulingano, ukoyika ukwenzakala, iingcinga ezinobundlobongela kunye nemifanekiso, uloyiko ngokwesondo, inkolo kunye nokuziphatha. Kuzo zonke iimeko, ezi ngcinga zibangela uloyiko kumntu one-OCD kuba zichasene nesazisi kunye nokuthandabuza ukungathandabuzeki kunye nokungaqiniseki ebomini babo.
Ukulungiselela ukukhulula iimvakalelo ezingathandekiyo zoxinzelelo, uloyiko, iintloni, kunye / okanye ukukruquka kwi-Obsession, isenzo okanye isimilo senziwa ukunciphisa okanye ukuphelisa uxinzelelo. Oku kubizwa ngokuba kukuNyanzelwa. Ukunyanzelwa, okanye nasiphi na isenzo sokuphepha okanye ukunciphisa uxinzelelo okanye ityala, zinokuza ngeendlela ezininzi; ukucoca, ukuhlamba, ukujonga, ukubala, iiteki, okanye nasiphi na isenzo sengqondo esiphindaphindayo okanye esihlola ngengqondo ukumisela ukuba umntu ukwenzile okanye uyakwazi ukwenza naziphi na iingcinga eziqwalaselweyo.
Iqheleke kangakanani i-OCD kunye ne-OCD yomjikelo?
Isifundo esenziwe nguMbutho wezeMpilo weHlabathi sichonge ukuba i-OCD iphakathi kwezifo ezilishumi eziphambili, ezinxulunyaniswa nokuphazamiseka kwengqondo. I-OCD iye yaba sisifo sesine esixhaphake kakhulu kwizifo zengqondo kunye ne-10 yesizathu esisisiseko sokukhubazeka kwihlabathi liphela. E-United States kuphela bangaphezu kwezigidi ezintathu abantu abaphethwe yi-OCD (Isiseko se-OCD seHlabathi, i-2018).
Funda ngakumbi malunga nenkcazo ye-OCD.
Umjikelo we-OCD ujikeleze ngokwendalo, usuka kwingcinga yokungena ngaphakathi (ebsessions), ebangela uloyiko, ukuthandabuza okanye unxunguphalo, ebangela isidingo sokwenza okunyanzelekileyo ukufumana ukukhululeka kuloyiko kunye noxinzelelo lwe-obsession evelisayo ephinda ibangele ukutyeba kwasekuqaleni. Ingxaki yokujikeleza yenziwa kuba ukunciphisa ukungonwabi kunye noxinzelelo ekwenzeni ukunyanzelwa yinto yexeshana kuphela kude kube yinto enomdla kwakhona.
Ukongeza, ukunciphisa uxinzelelo kusebenza kuphela ekomelezeni nasekomelezeni ukutyeba kwasekuqaleni. Ke ngoko, isenzo sokuqala okanye isimilo esiqale sanciphisa uxinzelelo siyasiphinda kwakhona ukukhupha ukungonwabi, kwaye siqhele ukwenziwa ukunyanzelwa. Kwelinye icala, ukunyanzelwa ngakunye kuqinisa ukutyeba, okukhokelela ekuqhubekekeni kokunyanzeliswa kokunyanzelwa. Ngenxa yoko, umjikelo okhohlakeleyo we-OCD uqala.
Iimpawu ze-OCD kubantu abadala
Yintoni i-OCD? Ngokutsho kwe-OCD Foundation, i-OCD "sisifo sengqondo ...
Ngaba lukhona uvavanyo lwe-OCD olukwi-Intanethi kumntwana wam?
Ukuphazamiseka okungafunekiyo okunyanzelekileyo, okuqhelekileyo kwaziwa njenge-OCD, kuyimpembelelo ye-neuropsychiatric / ...
Izinto ezili-17 ekufuneka uyazi nge-OCD
Sonke sinemikhwa yethu eyahlukileyo, iinkolelo, okanye amasiko angenabungozi ...